Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – स्व: निर्भर समुहको कार्यले समाजमा एक नया उदाहरण पेश गरेको छ
Oct 25, 2016 DT Admin General Comments Off on स्व: निर्भर समुहको कार्यले समाजमा एक नया उदाहरण पेश गरेको छ
सामसिङ फारीका जागृति स्वःनिर्भर समुहले समुहबाट आय भएको रकमले एउटा चार चक्के वाहन किनेका छन ।
अहिले उक्त मारुती भेनले फारीबाट सुनतले सम्म पर्यटकहरु खेपने गर्दै छ सोही समुहका सदस्यहरुले फारीमा नै एक पसल पनि चलाइ रहेका छन ।
समुहको उक्त कार्यले समाजमा एक नया उदाहरण पेश गरेको छ । नारी शसत्तिकरणको निम्ति सरकारले आज धेरै प्रकारका योजनाहर शुरु गरेको छ ।
ताकि गाँव वस्ती चिया कमानका क्षेत्रका गरीब महिलाहरु पनि आर्थिक रुपले सबल हुन सकून । यहाँका नारीहरुले यस उक्तिलाई साकार पार्नको निम्ति मैदानमा उतरेका छन ।
स्वःनिर्भर समुलाई सक्रिय बनाउनको निम्ति सरकारले धेरै योजनाहरु तैयार पारेको छ । तर उक्त सरकारी योजनाको गाँव वस्ती चिया कमानका क्षेत्रका स्वःनिर्भर समुहले भनेजस्तो लाभ उठाउन सकेको छैन ।
कारण समुहमा भएका महिलाहरुलाई योजनाको कार्य क्षेत्रको राम्रो ज्ञान पनि छैन । जसले गर्दा यस्ता समुहहरु चाहे जस्तो कार्यहरु गर्न असक्षम पनि बनेको देखिन्छ र धेरै ठाउँमा त यस्ता समुहरु निस्क्रिय पनि बनेको छ ।
तरै पनि दार्जिलिङ जलपाइगढी सिमाना क्षेत्रमा रहेको फारीका स्वःनिर्भर समुहले एक नया उदाहरण पेश गरेको छ ।
जागृति स्वःनिर्भर समुहले समुहका नेतृ अजीता भुजेलले समुहको कार्यबारे जानकारी गराउँदै भनीन् हामीले यहाँ भरकरै समुह गठन गरेका हौं ।
जागृति समुहमा दस जना सदस्यहरु रहेको छ । सबै सदस्हरु मिलेर हामी पालै पालो अनि यहाँ एक दोकान पनि चलाएको तिनले भन्दै अघि अझ भनीन् हामीले बैङ्कबाट केही ७० हजार ऋण लिएर समुहको कार्यलाई अझ फराकिलो पार्ने योजना बनाएका छौं ।
वर्तमान हामीकामा लगानी क्षमता कम भएको कारण धेरै कामहरु चाहेर पनि गर्न सकेका छैनौं । हाल हामीसंग एउटा मारुती भेन रहेको छ ।
जसलाई हामी पर्यटक खेपनको निम्ति प्रयोग गरी रहेका छौं । यसबाट पनि आय भइ रहेको छ ।
यसरी नै समुहको आय श्रोतलाई बढाउनको निम्ति अझ धेरै समाजिक कार्यहरुमा हात बढाउने समुहका अर्का सदस्य सरस्वती भुजेलले बताइन ।
तिनीहरुले बताए यसपाली यहाँ पर्यटकहरु धेरै आइ रहेका छन । र्दैनिकी आय पनि हाम्रो बढी रहेको छ ।
तर सामसिङबाट यहाँ आउने सडकको अवस्था भने सोचनीय छ ।
यदि यो सकडको मरम्ती हुन सके पर्यटकहरुको संख्यामा वृद्धि हुने अनि तेस्को लाभ समुहले पाउने तिनीहरु बताउँछन ।
CLAIM THE 12% ELECTRICTY - CPRM Advises #Gorkhaland Territorial Administration ROAD ALERT: Pankhabari Road Shut Down for Repairs
237,545 total views, 187 views today
267,067 total views, 187 views today
283,297 total views, 187 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 283,314 total views, 187 views today Comments comments
283,314 total views, 187 views today
283,236 total views, 187 views today